Man United oo loo soo bandhigay Mauro Icardi si uu qeyb uga noqdo heshiiska uu Lukaku ku aadayo Inter Milan. – Gool FM
Man United oo loo soo bandhigay Mauro Icardi si uu qeyb uga noqdo heshiiska uu Lukaku ku aadayo Inter Milan.
(Milan) 17 June 2019. Man United ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula saxiixato Mauro Icardi oo ka tirsan Inter Milan xagagan si uu qeyb uga noqdo heshiiska uu Romelu Lukaku ku aadayo garoonka San Siro Stadium.
Xiddigaan reer Argentina ayaan laga jecleen kooxdiisa maadaama ay maamulka isku dhaceen horaantii sanadkaan markaas oo ay xaaskiisa ahna wakiilkiisa (Wanda Nara) ka hadashay mid ka mid ah TV-yada wadanka talyaaniga, waxaana xusid mudan in gabi ahaanba laga xayuubiyay xilkii kabtanimo uu kooxda u hayay.
26-jirkaan heerka caalami ayaa diiday inuu ciyaaro kulan ka tirsan koobka UEFA Europa League oo ay la lahaayeen Rapid Vienna, waxeyna taasi ku hogaamisay inuu 53-maalmood ka maqnaado kooxdiisa.
Icardi ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa wuxuuna gool dhaliyay kulan ay kooxdiisa 4-0 ku dileen Genoa maalintii 3-aad ee bisha April, balse kooxda Inter wali kuma qanacsana shaqadiisa waxeyna dooneysaa iney iska fogeyso iyadoo u adeegsaneysa heshiiska Lukaku.
Gazzetta dello Sport ayaa qireysa in kooxdaan aysan dooneyn iney bixiso lacagaha la duldhigay Lukaku oo gaaraya 80 Malyan oo Pound, balse ay dooneyso iney ku xaliso Icardi si ay lacago yar ugu darto.
Antonio Conte ayaa taageero weyn u ah 26-jirka reer Belgium kaas oo ku sugan Old Trafford, wuxuuna mar isku dayay inuu kala soo wareego Everton sanadkii 2017 isagoo ku sugan Blues.
Miyey kooxda Juventus isaga hartay loolankii ay ugu jirtay daafaca da'da yar ee Ajax Matthijs de Ligt?